काभ्रेमा खोपका लागि तीन हजार परिचालन, ३१ हजार ७९२ लाई दादुरा रुबेला खोप – Radio Roshi
काभ्रेमा खोपका लागि तीन हजार परिचालन, ३१ हजार ७९२ लाई दादुरा रुबेला खोप
in रोशी खबर / स्थानीय तह / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	March 12, 2020
नेपाल सरकारले सन् २०२३ भित्रमा नेपाललाई दादुरा–रुबेला रोगबाट उन्मुख गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २००४ बाट नेपालमा दादुरा–रुबेला उन्मुलनका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको पनि छ । अहिले पाँचौ खोप कार्यक्रम हो ।
दादुरा–रुबेलाका कारण नेपालका बालबालिकाको अकाल मै मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख नरेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सन् २००४ मा नेपाल सरकारले ६ बर्षदेखी १५ बर्षमुनीका बालबालिकालाई दादुरा–रुबेला खोप लगाएको थियो । सन् २००८ देखी सन् २०२० सम्म आइपुग्दा नौ महिना देखी पाँच बर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउँदै आइएको छ । हामी सन २०२३ भित्रमा नेपाललाई दादुरा–रुबेला र पोलियो रोग उन्मुलन अभियानमा छौँ । यस बर्षको खोप अन्तिम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालयले चैत २ देखी १० गते सम्म धुलिखेल, पाँचखाल, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा खोप सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै रोसी, भुम्लु, चौँरीदेउराली र तेमाल गाउँपालिकामा पनि पहिलो चरणमा खोप सञ्चालन हुने छ । त्यस्तै कार्यालय चैत १४ देखी २२ गते सम्म बनेपा, पनौती नगरपालिका, बेथानचोक, खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकामा दादुरा–रुबेला खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका कार्यालय प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार झाले काभ्रेका १३ स्थानीय तहका ३१ हजार सात सय ९२ बालबालिकालाई दादुरा–रुबेला खोप लगाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका ९६२ खोप केन्द्रमा एक हजार ९२४ स्वयंम सेवक र एक हजार ८७ खोप कार्यकर्ता मार्फत दादुरा–रुबेला खोप लगाइने छ ।
सन् २०२३ भित्रमा नेपाललाई दादुरा–रुबेला उन्मुलन गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको परिवार कल्याण महासंघ निर्देशक डा. झलक शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाललाई दादुरा–रुबेला रोग उन्मुलनका लागि ३० लाख बालबालिकालाई खोप लगाउन लागिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य निर्देशक रमेश अधिकारीले मुलुकभरका ४३० वटा दादुरा–रुबेला केस भेटिएपछि थप खोप लगाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नुवाकोट जिल्लाका बाहेक बाग्मती प्रदेशका अन्य १२ जिल्ला पूर्ण खोप घोषणा भएको बताउनुभयो । अझै प्रदेश न २ मा पोलियो थोपा खुवाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश न २ का १८ लाख बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाइने छ ।